Myat Shu - 2012 October
You are here : Myat Shu » Archives for October 2012
Published By Myat Shu On Sunday, October 28th 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
swfw.mdstate.fl.us “ဒီအရက်ဟာ မကောင်းပါဘူးကွာ” ဟု သူက ရေရွတ်လိုက်သည်။ ထိုအခါ ဆိုင်ရှင်ကြားသွားပြီး “ဒီအရက်ဟာ ဆိုင်က ထုတ်ပေးတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာ။ ကျွန်တော်က ဘယ်တော့မှ အကြံအဖန် မလုပ်တတ်ဘူးဆိုတာ အစ်ကိုကြီးသိပါတယ်။ အမြဲသောက်နေကျပဲ မဟုတ်လား” သူက “ဟာ.. ဟာ” ဆိုလုပ်၍ လက်ကာပြသည်။ “ခင်ဗျား ဆိုင်အရက်ကို မကောင်းဘူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ အရက်ဟာ ကျုပ်ကို ကောင်းကျိုးမပေးဘူးလို့ ပြောတာပါ” “ကောင်းကျိုးမပေးရင် မသောက်နဲ့ဗျာ” ဟူ၍တော့ ပိုင်ရှင်ကဖြင့် ပြောလို့ မဖြစ်ချေ။ အရက်ရောင်းနေသူ တစ်ယောက်က အရက်ဆန့်ကျင်ရေး စကားကို ပြောနေလျှင် “မိမိရောင်းကုန်ပစ္စည်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေသော စကားမျိုး မပြောမိပါစေနှင့်” ဆိုသော ခေတ်သစ်ရောင်းဝယ်ရေးဗျူဟာ သဘောတရားကို ဖောက်ဖျက်ရာကျမည် မဟုတ်လား။ ထို့ကြောင့် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Sunday, October 28th 2012. Under မျက်ရှု, အက်ဆေး
တစ်နှစ်က ပုဂံအာနန္ဒာဘုရားပွဲတော်ဆီသို့ သွားဖြစ်သည်။ ဘုရားပွဲများကို အရောက်အပေါက်နည်းသွားသဖြင့် ကြိုတင်စီစဉ်၍ သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အညာဘုရားပွဲ တော်တော်များများကို သွားဖြစ်ခဲ့သည်။ အောက်မင်းဘူး ရွှေစက်တော်မှ အထက်ဟီတောဘုရားပွဲအထိ၊ အနောက်ဘက် မုံရွေးသံဗုဒ္ဓေပွဲမှ အရှေ့ဘော်ကြိုဘုရားပွဲအထိ အထက်ပိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် အလယ်ပိုင်း မြန်မာပြည်ရှိ ဘုရားပွဲများသို့ အခါအခွင့်သင့်သလို ရောက်တတ်သည်။ နှစ်စဉ်မဟုတ်သည့်တိုင် နှစ်ခြား၍ ရောက်တတ်သည်။ ကျွန်တော့်မှတ်စုစာအုပ်ထဲတွင် အညာဘုရားပွဲတော် ကျင်းပသည့်ရက်တွေ မှတ်ထားသည်။ ကျေးလက်က လူတွေက ကျေးလက်ထွက် ကုန်ပစ္စည်းတွေကို သယ်လာကြသည်။ သစ်ဝါးထွက်ပစ္စည်းများ၊ လယ်ယာအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ၊ မြေအိုးမြေခွက် စဉ့်အိုး စဉ့်ခွက် စသည့် အိုးခွက်ပစ္စည်းများ၊ လယ်သမားသုံး သံထည်ပစ္စည်းများ၊ ကျေးလက်မှ ထွက်သည့် စားသောက်ဖွယ် အခြောက်အခြမ်းပစ္စည်းများနှင့် သစ်သီးဝလံများ၊ ... Continue Reading
မီးခိုးငွေ့ကြားမှာ (သားသို့ပေးစာ – ၁၀)
Published By Myat Shu On Monday, October 22nd 2012. Under မျက်ရှု, ပေးစာ
ချစ်သောသားလေးရဲဝဏ္ဏ... မနေ့က ဖေဖေ ရုံးကနေ အိမ်ပြန်လာတော့ အိမ်ရှေ့ ရေမြောင်းလေးဘေးမှာ သားအရွယ် ကလေးတစ်ယောက်က စီးကရက်သောက်နေတယ်လေ။ဖေဖေ လန့်ဖျပ် တုန်လှုပ်သွားတယ် သားရယ်။ သားလေးက ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီ ၁၁ရက်မှာ မွေးတာဆိုတော့ သားတောင် ၁၃နှစ်ထဲ ၀င်ရုံရှိသေးတယ်။ အခု ကလေးလေးက သားအရွယ်ဆိုတော့ ၁၂ - ၁၃နှစ်လောက်ပဲ ရှိဦးမှာပါ။ ကိုယ့် သားသမီး မဟုတ်ပေမယ့် ဖေဖေ ဥပေက္ခာ မပြုနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကောင်လေးရဲ့ ပါးစပ်ဖျားက စီးကရက်ကို ဆွဲယူပြီး မြောင်းထဲ လွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။ ၏ “မင်းကွာ..ဘာလို့ဆေးလိပ်သောက်ရတာလဲ..ဆေးလိပ်က အဆိပ် တစ်မျိုးပဲ.... ဆိုးကျိုးတွေမှ အများကြီး” ဖေဖေ့ ပြောစကားကို ကောင်လေးက အရေးမထားပါဘူး သားရယ်...။ ခင်ဗျားနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Monday, October 15th 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
Photo:www.greentrail-indochina.com ကျွန်မ အသက် (၄၅) နှစ် ကျွန်မ ခေါင်းကို ဘယ်နှစ်ကြိမ် ကုတ်နေမိမှန်းတောင် မသိတော့။ လက်ထဲက ဘောပင်ကို အသာချ၊ ဂဏန်းပေါင်းစက်ကလေးနဲ့ စာရွက်ပေါ် ချရေးထားတဲ့ နာမည်တွေထဲက ဒီနှစ်သီတင်းကျွတ်မှာ မဖြစ်မနေ ကန်တော့ရတော့မယ့် သူတွေနဲ့ သူတို့အတွက် လျာထားတဲ့ ကန်တော့ဖွယ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ ဘေးက ခန့်မှန်းကိန်းဂဏန်းများကို ကြည့်လို့ တစ်ခုချင်း နှိပ်ပြီး ပေါင်းလိုက်ပါတယ်။ အဖေနဲ့အမေ ၂၅၀၀၀/- ကိုသက်အောင်အဖေနဲ့အမေ ၂၅၀၀၀/- ကိုသက်အောင်အဘွား ၁၅၀၀၀/- ရုံးကန်တော့ပွဲအတွက်ထည့်ဝင်ငွေ ၁၅၀၀၀/- သမီးလေးရဲ့အတန်းပိုင်ဆရာမ ၁၅၀၀၀/- သမီးလေးရဲ့ ကျူရှင်ဆရာမ ၁၅၀၀၀/- မုန့်ဖိုးပြန်ပေးငွေ ၃၀၀၀၀/- “ဘုရားရေ.. ” ကျွန်မ ပါးစပ်က အသံတောင် ယောင်ပြီး ထွက်သွားရတယ်။ စုစုပေါင်း တစ်သိန်းခွဲနား နီးနေပါရော့လား။ ကျွန်မ ခေါင်းကို အသာလေးတောင် ယမ်းလိုက်မိသလား မသိ။ ... Continue Reading
ထို… ထို… ထိုသော သစ္စာ
Published By Myat Shu On Monday, October 15th 2012. Under မျက်ရှု, နှလုံးသားစာမျက်နှာ
www.folksy.com မိ… (၁) “မမလေး… မန္တလေးက ကြီးကြီးဆီက ဖုန်းလာနေပါတယ်ရှင့်…” “သြော်… အေးအေး လာပြီ လာပြီ… ” ချက်လက်စ ဟင်းအိုးလေးကို မီးပိတ်လို့ အိမ်ရှေ့ခန်း ဖုန်းရှိရာကို ပြေးလာခဲ့တယ်။ စိတ်ထဲကနေလည်း ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားရတယ်။ ကိုကို မန္တလေးကို သွားနေတာ နှစ်ပတ်လောက်ရှိနေပြီလေ။ ကြီးကြီး ဖုန်း မဆက်စဘူး ဆက်တယ်ဆိုတော့ ဘာများအရေးကြီးသလဲလို့ တွေးလိုက်မိရတယ်။ “ဟလို… ကြီးကြီး… မိပါ… ကြီးကြီး နေကောင်းတယ်နော်…” “သည်မယ် မိမိ… ညည်း ဘာလုပ်နေတာတုံး… ယောက်ျားကို သည်အတိုင်း ပစ်ထားပြီး နေတော့မှာလား… အခုချက်ချင်း ဖုန်းချပြီးတာနဲ့ ဘယ်နည်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ညည်း သည်ကို လိုက်လာဖို့ စီစဉ်ပါ။” “ရှင်… ကြီးကြီး… ဘာဖြစ်လို့… ဟောတော့…” ကြီးကြီးကလည်း ... Continue Reading
အိပ်စက်နေတဲ့သူရဲကောင်းတွေ – ပိုလန်ဒဏ္ဍာရီ
Published By Myat Shu On Sunday, October 14th 2012. Under ပုံပြင်, ဘာသာပြန်, မျက်ရှု
Wladyslaw Skoczylas (1883-1934) ဥရောပတိုက်မှာရှိတဲ့ ပိုလန်နိုင်ငံဟာ သူရသတ္တိ ပြည့်ဝတဲ့ သူရဲကောင်းတွေရဲ့ အမိမြေလို့ ထင်ရှားပါတယ်။ ရဲစွမ်းသတ္တိ ပြည့်ဝတဲ့ သူရဲကောင်းတွေဟာ ဘယ်တော့မှ မသေဆုံးဘူး။ သူတို့ဟာ ပီဆာနာတောင်ခြေက လိုဏ်ဂူကြီးတစ်ခုထဲမှာ အိပ်စက် အနားယူနေရင်းနဲ့ ပိုလန်နိုင်ငံကို စောင့်ရှောက်ဖို့ အသင့်ရှိနေတယ်လို့ ပိုလန်လူမျိုးတွေက ယုံကြည်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတုန်းကပေါ့ကွယ်။ “ပီဆာနာ” တောင်ခြေက ရွာကလေးမှာရှိတဲ့ ပန်းပဲဖိုထဲကို ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း လူတစ်ယောက်ဟာ ဗြုန်းစားကြီး ၀င်လာသတဲ့။ မြင်နေကျ တွေ့နေကျ မဟုတ်တော့ ပန်းပဲဆရာကြီးလည်း အံ့အားသင့် သွားတာပေါ့။ အဲဒီ ဗလတောင့်တောင်နဲ့ လူစိမ်းဟာ ပန်းပဲဆရာကြီးကို ဒီလို ပြောလိုက်သတဲ့။ “ဒီမယ် ပန်းပဲဆရာကြီး။ ခင်ဗျားကို ကျုပ် အလုပ်တစ်ခု အပ်ချင်ပါတယ်။ ... Continue Reading